BW2 waxay leedahay barta dhalaalida sare, adkaanta sare, habdhaqanka sare iyo iska caabinta daxalka sare iyo u adkeysiga oksida ee noocyada kala duwan ee warbaahinta. Waxyaabahan aadka ufiican ayaa sameeya iskudhafyada WB Si baahsan ayaa loogu isticmaalay deegaanno qalafsan .Dhiibinta dahaarka iyo filimka semiconductor, qalabka koronto ee daxalka heerkulka sare, caaryada tuurista, iskutallaab iyo wixii la mid ah
Caanaha molecular WB2
Lambarka CAS 12228-69-2
Barta dhalaalida 2900 ℃
Codsiga awgeeda oo adkaatay awgeed waxaa loo isticmaali karaa maaddo heer kulkeedu sarreeyo oo la xoqin karo
Tungsten boride waxay leedahay barta dhalaalida sare, adkaanta sare, xasiloonida kiimikada iyo waxyaabo kale oo dhameystiran. Ma aha oo kaliya qalab cusub oo superhard ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay adkeyn sare. Waa shey muhiim u ah rasaasta aan militariga lahayn. Tungsten boride waxay leedahay jaantusyo waji badan, qaabdhismeedka wajiyo kaladuwan sidoo kale waa la beddeli karaa. In ka badan 50 sano, ku qanacsanaanta ugu badan ee tungsten waxaa loo maleynayay inuu yahay WB4, oo leh seddex qaab cabbir oo atamyo boron ah. Xasiloonida heer-sarreynta iyo astaamaha farsamooyinka ee wejiyada qaab-dhismeedka suurtagalka ah ee nidaamka carbide tungsten ayaa si nidaamsan loo darsay iyadoo la isku darayo xisaabinta mabda'a koowaad iyo xasiloonida thermodynamic:
Sababtoo ah isugeyn faafida hooseysa ee bilaashka ah ee WB2, waqtigan xaadirka ah, iskudhiska cufnaanta tungsten diboride ayaa inta badan lagu gaaraa iyadoo lagu kala baxayo heerkulka sare iyo cadaadiska. Dhanka kale, maxaa yeelay B wuxuu uumi baxa heerkulka sare. Sidaa darteed, diyaarinta tooska ah ee qalabka block WB2 oo leh budada tungsten iyo budada boron way adagtahay in la xakameeyo waxyaabaha boronka ku jira, iyo borides hoose (sida W2B) ayaa laga yaabaa in lagu soo saaro geeddi-socodka sintering, sidaas darteed qalabka baaxadda weyn ee leh WB2 sida wajiga ugu weyn lama heli karo gebi ahaanba.
Xidho - daahan adkaysi u leh iyo semiconductor filimka loogu talagalay xirmooyinka adkaysi u leh.
Hore: Budada Tantalum Boride, TaB2
Xiga: Budada budada ah ee Vanadium, VB2